Hadda waa la heli karaa, beta ahaan, Adobe Illustrator oo loogu talagalay Apple Silicon | Waxaan ka socdaa mac
Hadda waa la heli karaa, beta, Adobe Illustrator oo loogu talagalay Apple Silicon
Markay bilooyinku sii socdaan, ragga kujira Adobe waxay cusbooneysiiyaan mid kasta oo ka mid ah codsiyada ay ka bixiyaan suuqa si ay uga dhigaan inay asal ahaan la jaan qaadi karaan processor-ka Apple ee M1. Dhowr toddobaad ka hor, way sii daayeen nooca ugu dambeeya de Adobe Photoshop, nooc wali ka maqan howlo badan oo lagu daro.
Hadda waa markiisii Adobe Illustrator, codsi yaa beta hore ayaa hada la heli karaa iyo inay timaaddo saddex bilood ka dib betaskii ugu horreeyay ee Adobe Premiere Pro, Premiere Rush iyo Audution, oo tilmaamaya in Sawire-bixiyuhu yahay digaagga foosha xun ee Adobe.
Sidii betasyadii hore, Adobe wuxuu sheegayaa in beta-kii ugu horreeyay ee Sawirqaade la jaan-qaadaya processor-ka Apple ee M1 ay kamid yihiin shaqooyin badan oo aasaasi ah nooca nooca processor-yada Intel iyo in bilaha sii socdaan, howlaha intiisa kale la fulin doono si aysan isticmaaleyaashu u sii wadin adeegsiga Rosetta 2 howlo gaar ah.
Illaa iyo hadda, adeegsadayaashu waxay ahayd inay adeegsadaan emulator-ka 'Rosetta 2 Apple' si ay ugu socodsiiyaan Adobe Illustrator-ka Mac-yada ay ku shaqeeyso processor-ka Apple ee M1. Sida Photoshop, Sawirqaade kaliya ma bixiyo a waxqabadka dhakhsaha badan, laakiin marka lagu daro, isku halaynta ayaa sidoo kale kordhay, sida ay sheegaan Adobe.
Haddii aad tahay isticmaaleyaasha Adobe Creative Cloud oo aad leedahay mid ka mid ah kombiyuutarada cusub ee Apple ee wata processor ARM, waad awoodi kartaa hadda ku soo dejiso nuqulkan kombiyuutarka adoo adeegsanaya barnaamijka 'Cloud Cloud Desktop', halkaasoo ay sidoo kale laga heli karo inta ka hartay betas ee, hadda, laga heli karo inta ka hartay codsiyada horumariye.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Hadda waa la heli karaa, beta, Adobe Illustrator oo loogu talagalay Apple Silicon
Jason Sudeikis ayaa ku guulaystay abaalmarinta SAG ee waxqabadka ugu fiican ee Ted Lasso